Soomaali laga soo celiyay Liibiya oo dalka soo gaaray iyo gobolada ay ka tahriibeen - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Soomaali laga soo celiyay Liibiya oo dalka soo gaaray iyo gobolada ay ka tahriibeen
Tiro Somali ah ayaa maanta dalka dib ugu soo noqdey kuwaas oo laga soo celiyay dalka burburey ee Liibiya halkaas oo hadda hogaamiye Khaliif Xaftar uu rabo inuu la wareego amniga dalkoo dhan.
Dhalinyarada oo gaaraya lix (6) waxay isugu jireen shan wiil iyo hal gabar ayaa ka tahriibay markii hore gobolka Banaadir, Woqooyi Galbeed, Gobolka Nugaal, iyo Woqooyi Bari Kiiniya (NFD). Dhalintan ayaa Dhawr sano ku xirnaa Xabsiyo ku yaala dalka Liibiya halkaasoo ay ku haysteen Magafeyaal ah.
Waxaana maanta Nasiib ay u yeesheen inay dib dalkooda ugu soo laabtaan kadib markii ay arintaas Dadaal wayn u gashay Dawlada Soomaaliya gaar ahaan danjire Maryam Yaasiin oo ah Ergeyga gaarka ah ee Xuquuqda Carruurta iyo Tahriibayaasha ee Xafiiska Ra’iisalwasaaraha.
Markii ay soo gaareen Magaalada Muqdisho waxaa si heer sare ah usoo dhaweeyey Masuuliyiin ka socotay Xafiiska Ergeyga gaarka ah ee xuquuqda Carruurta iyo tahriibayaasha ee Xafiiska Ra’iisal wasaaraha, Madaxda Hay’adda Qaxootiga Qaranka iyo barakacayaasha iyo Wakiilo matalayey hay’adda Socdaalka Aduunka.
Maaha markii ugu horeysay oo dhalinyaro naftooda haligey lagu soo celiyo dalka, kuwaas oo waalidiintood ku kalifay inay ka seexan waayeen kuna ridey cuduro badan.